Abalimi abahambisani nokukhushulwa kweholo labasebenzi basemapulazini | Scrolla Izindaba
Abalimi abahambisani nokukhushulwa kweholo labasebenzi basemapulazini
Ukukhuphuka kwemali eyi-16% kuzwelonke yabasebenzi basemapulazini kungahle kubonakale kuyizindaba ezinhle kubasebenzi basemapulazini asebeneminyaka eminingi bephakathi kwabahola kancane ezweni.
Inani eliphansi manje selibekwe emalini eyizi-R3,600 futhi lizoqala ukusebenza kusuka ngomhla wokuqala kuNdasa.
Kepha izindaba ezinhle zingahle zigcine sezikhalisa njengoba abalimi nezinyunyana zabalimi bexwayise ngokulahleka okukhulu kwemisebenzi, ukwenyuka kwentengo, amahora ambalwa okusebenza, nezinye izinto ezingaphazamisa umkhakha wezolimo.
USihlalo uTshianeo Mathidi we-African Farmers Association of South Africa e-Limpopo uthe abaphikisani nokukhuphuka kweholo labasebenzi basemapulazini ngoba lokho kuzothuthukisa izimpilo zabo kodwa waxwayisa ukuthi isinqumo sikahulumeni singaba yingozi.
“Izinto bezingahambi kahle. Sibe nesomiso esinzima esacishe sasenza siphume ebhizinisini sahlaselwa wubhubhane lwe-Covid 19,” kusho uMathidi.
Uthe ngokwezezimali umkhakha wezolimo uphansi kakhulu.
“Kunzima ukuthi sigcine amabhizinisi ethu eqhubeka nokwenyuka kwamaholo kuzophinde kuthinte okuncane esinakho.”
UMathidi uthe ukuxoxisana kwabo njalo nohulumeni mayelana namaholo akubanga nezithelo ezinhle njengoba uhulumeni enegama lokugcina.
U-Edward Nemushungwa osebenze emapulazini ase-Levubu iminyaka eminingi uthe lokhu kukhuphuka kweholo kuyizindaba ezimnandi.
“Sikhishwe inyumbazane isikhathi eside futhi siyajabula ukuthi uhulumeni ugcine esisizile. Siyathemba ukuthi abaqashi bethu bazosithobela futhi basikhokhele njengoba kuyalelwe,” uyasho.